Izidleke zezinyoni Izinzwa zobuciko - imibono yasekhaya nengadi
06.01.2014 Kuthunyelwe ngu: Sense Art
Fast, kulula, okumnandi!, Imibono Yasekhaya, Ungadliwa
Yini okungaba isidlo sasekuseni esifanele noma isidlo sakusihlwa uma unemikhiqizo ehlukile, ehambisanayo kodwa ungazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani? Impela, isinkwa siyimpendulo yemibuzo eminingi, futhi kulokhu isinkwa sikakolweni singaba yisisombululo esihle. Umqondo owethulwe unenhlanganisela yesinkwa, amaqanda, i-ham ebhemayo, isaladi lamazambane, utamatisi we-Cherry, ushizi, u-anyanisi we-caramelized, ugalikhi, ibhotela, i-coriander entsha, engabekwa kalula nge-parsley.
Indlela yokulungiselela: Sika iziqhekeza ezinkwaleni bese ubaza okungaphakathi nesipuni. Ngamafutha athambile, ugcoba ingaphakathi nokunambitha. Hlela ukugxusha kusilinganiso esithandwayo nenhlanganisela, bese ubeka kuhhavini we-200 we-preheated. Kuya ngesitofu, ungapheka nge-fan noma nge-foil, kanye nemizuzu ye-10 ngaphambi kokuthi uqede ukufafaza ngesipayisi esiluhlaza, kwephula iqanda elilodwa ubhake. Khonza futhi umangale!
izindlela zokupheka ezisheshayo, zokupheka okumnandi, isaladi lamazambane, izitsha zamakhekhe, izitsha zezinkwa, izitsha zezinkwa, izitsha ezinokugxusha, izitsha zokugcwalisa, izitsha ezinamaqanda, izindlela zokupheka ezilula, izidleke zezinyoni, izitsha ezazigxishwe, amakhekhe agxiliwe, isinkwa esigcwalisiwe, zokupheka, zokupheka inhlama, zokupheka isinkwa, zokupheka zamaqanda, ushizi, ham, amaqanda, amaqanda emiqolweni yesinkwa, imibono yasekhaya, umklamo ongaphakathi, ifenisha, imibono yangaphakathi, design imibono, ikhaya lesimanjemanje, ukuhlobisa imibono, imibono yobuciko
Obhotela inhlama ebilisiwe
Yenza lawa ma-dessert ajabulisayo, asuselwa emabintheni ngobuciko kwesinye sezinhlobonhlobo zawo ...
Iresiphi engeyona ejwayelekile yenkukhu enamazambane
Inhlanganisela yenkukhu namazambane iyinhlangano esezingeni lokudla okuningana. Le iresiphi unikeza ...
Ubaba onekhono wenza ama-pancake ahlukile
Nakhu ukuthi ubaba onekhono ugcwalisa kanjani izifiso zezingane zakhe ngokuzenza ipancake ...
Amabhisikidi kaNapoleon - isobho elimnandi nelula
I- "Napoleon" ingelinye lamagama amaningi nokwehluka kwesidlo sakudala esine-French ...
Le ndlela yangempela yokupheka inkukhu emnandi engaphandle. Indlela efanelekile njenge ...
Sesha kungobo yomlando - Khetha inyanga - Janawari 2020 UDisemba 2019 Novemba 2019 Ngo-Okthoba 2019 Septhemba 2019 Agasti 2019 Julayi 2019 NgoJuni 2019 Kwangathi 2019 Ephreli 2019 Mashi 2019 NgoFebhuwari 2019 Janawari 2019 UDisemba 2018 Ngo-Okthoba 2018 Septhemba 2018 Agasti 2018 Julayi 2018 NgoJuni 2018 Kwangathi 2018 Ephreli 2018 Mashi 2018 NgoFebhuwari 2018 Janawari 2018 UDisemba 2017 Novemba 2017 Ngo-Okthoba 2017 Septhemba 2017 Agasti 2017 Julayi 2017 NgoJuni 2017 Kwangathi 2017 Ephreli 2017 Mashi 2017 Novemba 2016 Julayi 2016 NgoJuni 2016 Kwangathi 2016 Ephreli 2016 Mashi 2016 Janawari 2016 UDisemba 2015 Novemba 2015 Ngo-Okthoba 2015 Septhemba 2015 Agasti 2015 Julayi 2015 NgoJuni 2015 Kwangathi 2015 Ephreli 2015 Mashi 2015 NgoFebhuwari 2015 Janawari 2015 UDisemba 2014 Novemba 2014 Ngo-Okthoba 2014 Septhemba 2014 Agasti 2014 Julayi 2014 NgoJuni 2014 Kwangathi 2014 Ephreli 2014 Mashi 2014 NgoFebhuwari 2014 Janawari 2014 UDisemba 2013 Novemba 2013 Ngo-Okthoba 2013 Septhemba 2013 Agasti 2013 NgoJuni 2013 Kwangathi 2013 Ephreli 2013 Mashi 2013 NgoFebhuwari 2013 Janawari 2013 UDisemba 2012 Novemba 2012 Ngo-Okthoba 2012 Septhemba 2012 Agasti 2012 Julayi 2012 NgoJuni 2012 Kwangathi 2012 Ephreli 2012 Mashi 2012